किन अरुसित सल्किन्छन् विवाहित महिला/पुरुष ? - IAUA
ramkrishna November 25, 2017	crime
एक्ट्रा म्यारिटल अफेयर अर्थात बिवाहेत्तर सम्बन्ध । दम्पतीबीच भाँजो हाल्ने यो प्रवृत्ति हामीकहाँ पनि व्यापक हुँदै गएको छ । यो भनेको, बिवाहित पुरुष वा महिला परपुरुष/परस्त्रिसँग सम्बन्ध बढाउनु हो । शरीरिक वा मानसिक रुपमा ।
स्वभाविक हो, आफ्नो जीवनसाथीलाई धोका दिएर अर्कैसँग हिमचिम बढाएपछि दाम्पत्य जीवन धरापमा पर्छ । यो नहुनुपर्ने कुरा हो । तर, हुन्छ । किन ?
आखिर किन कोही महिला वा पुरुष तेस्रो व्यक्तिसँग सम्वन्ध गाँस्न पुग्छन् र आफ्नो वैवाहिक सम्वन्धलाई धरापमा पुर्‍याउँछन्, यसका कारणहरु खोतलौं-
रमाइलो र रोमाञ्चका लागि
त्यसो त विवाहइतर सम्वन्धलाई नयाँ जमानाको देन हो भनेर भनिहाल्न मिल्दैन । पहिले पनि यस्ता सम्वन्ध हुन्थे, तर यसमा आजजस्तो खुलेआम बहस हुँदैनथ्यो । आजकाल विवाहइतर सम्वन्धले मानिसहरुलाई स्तब्ध तुल्याउँदैन । यसलाई लिएर मानिसहरुको दृष्टिकोण सामान्य बन्दै गएको छ । समाजमा आएको यो परिवर्तनले पनि विवाह इतर सम्वन्धलाई बढावा दिन्छ । साथै, अफिसमा पुरुष र महिला सँगै काम गर्दा एक-अर्काप्रति आकषिर्त हुने र प्रेम बस्ने सम्भावना रहन्छ ।
कयौं विवाहित पुरुषहरु साथीसंगतिको प्रेरणा र उक्साहटमा घरबाहिर अफेयर गर्न पुग्छन् । यस्तो अफेयरले साथीहरुबीच आफ्नो ठूलो शान हुने भ्रम उनीहरुलाई परेको हुन्छ । अर्कोतर्फ पत्नीप्रति वफादार पुरुषलाई साथीहरुले ‘जोइटिंग्रे’ भनेर गिज्याउने पनि गर्छन् । त्यसबाट पनि उनीहरुलाई अफेयर राख्ने हौसला प्राप्त हुन्छ ।
Previous Previous post: कपाल झर्न नदिने नयाँ बायोकेमिकल
Next Next post: यी हुन् दुनियाका सबैभन्दा सुरक्षित र असुरक्षित देशहरु